Um Alumina (Al2O3)
Qaybaha dhoobada saxda ah ee ay soo saarto Kooxda Wax-soosaarka Caqliga leh ee ZhongHui (ZHHIMG) waxaa laga samayn karaa alaab ceeriin ah oo ceeriin ah oo aad u saafi ah, 92 ~ 97% alumina, 99.5% alumina,> 99.9% alumina, iyo CIP qabow gooni-goosad ah. Sintering heerkulka sare iyo machining sax, sax cabirka of ± 0.001mm, siman ilaa Ra0.1, isticmaal heerkulka ilaa 1600 digrii. Midabada kala duwan ee dhoobada waxaa lagu samayn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha, sida: madow, caddaan, beige, casaan mugdi ah, iwm. loo isticmaalay muddo dheer heerkulka sare, faaruqinta iyo deegaanka gaaska daxalka leh.
Si baaxad leh loogu adeegsado qalabka wax -soo -saarka semiconductor -ka kala duwan: Frames (qaybta dhoobada), Substrate -ka (saldhigga), Gacan/ Buundo (farsameeye),, Qaybaha Farsamada iyo Hawada Hawada dhoobada.
Codsiga dhoobada alumina ee daahirsanaanta sare:
1. Waxaa lagu dabaqay qalabka semiconductor -ka: Chuck vacuum ceramic, disc jarista, disc nadiifinta, dhoobada CHUCK.
2. Qaybaha wareejinta canjeerada: joodarrada gacanta ee canjeelada, cajaladaha goynta canjeerada, cajalladaha nadiifinta canjeelada, koobabka nuugista kormeerka indhaha ee wafer.
3. Warshadaha bandhigga guddi -hoosaad ee LED / LCD: biraha dhoobada, disc shiidi dhoobada, PIN LIFT, tareenka PIN.
4. Isgaarsiinta indhaha, warshadaha qorraxda: tuubooyinka dhoobada, usha dhoobada, shaashadda wareegga daabacaadda xoqidda dhoobada.
5. Qaybaha u adkaysta kulaylka iyo korontada ee dahaarka leh: dhejiska dhoobada.
Waqtigan xaadirka ah, dhoobada dhoobada aluminium waxaa loo qaybin karaa daahir sare iyo dhoobada caadiga ah. Taxanaha dhoobada aluminium -oxide -ka ee daahirka ah waxaa loola jeedaa maaddada dhoobada oo ay ku jiraan in ka badan 99.9% Al₂O₃. Sababtoo ah heerkulka qallafsan ee ah ilaa 1650 - 1990 ° C iyo mowjadda gudbinta ee 1 ~ 6μm, waxaa badanaa lagu farsameeyaa galaas la isku qasay halkii laga samayn lahaa weelka platinum: kaas oo loo adeegsan karo sidii tubbo soodiyam oo ay ugu wacan tahay gudbinta iftiinka iyo iska caabbinta daxalka biraha alkali. Warshadaha elektiroonigga ah, waxaa loo adeegsan karaa sidii wax-ku-celcelinta sare ee wax-ku-oolka ah ee substrate-ka IC. Marka loo eego waxyaabo kala duwan oo ka kooban oksaydhka aluminium, taxanaha dhoobada aluminium ee caadiga ah waxaa loo qaybin karaa 99 dhoobada, 95 dhoobada, 90 dhoobada iyo 85 dhoobada. Mararka qaarkood, dhoobada leh 80% ama 75% of aluminium oxide ayaa sidoo kale loo kala saaraa taxanaha dhoobada oksaydhka aluminium ee caadiga ah. Iyaga dhexdooda, 99 aluminium aluminium ah dhoobada dhoobada ayaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro weel heerkulkiisu sarreeyo, tuubo foorno dab-damis ah iyo agabyo u adkaysta dahaarka, sida dhejiska dhoobada, shaabadood dhoobada iyo taargooyinka waalka. 95 dhoobada dhoobada aluminiumka waxaa badanaa loo isticmaalaa sidii qayb adkaysi u leh daxalka u adkaysta. 85 dhoobada ayaa inta badan lagu qaso guryaha qaarkood, taas oo hagaajinaysa waxqabadka korontada iyo xoogga farsamada. Waxay adeegsan kartaa molybdenum, niobium, tantalum iyo shaabadood kale oo bir ah, qaarna waxaa loo isticmaalaa aaladaha faaruqinta korontada.
Shayga Tayada (Qiimaha Wakiilka) Magaca badeecada AES-12 AES-11 AES-11C AES-11F AES-22S AES-23 AL-31-03
Halabuurka Kiimikada Waxsoosaarka Shimbirta Yar ee Sodium-ka ah H₂O % 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
₂0₃ % 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
Dhexroorka Walxaha Dhexdhexaad (MT-3300, habka falanqaynta laser) μm 0.44 0.43 0.39 0.47 1.1 2.2 3
Size Cabbirka Crystal μm 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 ~ 1.0 0.3 ~ 4 0.3 ~ 4
Cufnaanta Samaynta ** g/cm³ 2.22 2.22 2.2 2.17 2.35 2.57 2.56
Cufnaanta Sintering ** g/cm³ 3.88 3.93 3.94 3.93 3.88 3.77 3.22
Heerka sii yaraanaya ee Sintering Line ** % 17 17 18 18 15 12 7
* MgO kuma jiro xisaabinta daahirnimada ee Al₂O₃.
* Ma jirto budo xajinaysa 29.4MPa (300kg/cm²), heerkulka sintering waa 1600 ° C.
AES-11 / 11C / 11F: Ku dar 0.05 ~ 0.1% MgO, sinterability-ku waa mid aad u fiican, sidaa darteed waxaa lagu dabaqi karaa dhoobada aluminium aluminium leh daahirnimo ka badan 99%.
AES-22S: Waxaa lagu gartaa cufnaanta sameynta sare iyo heerka sii yaraanaya ee xarriiqda qulqulka, waxaa lagu dabaqi karaa in la tuuro foomka siibista iyo alaabooyinka kale ee waaweyn oo leh saxnaanta cabbirka loo baahan yahay.
AES-23 / AES-31-03: Waxay leedahay cufnaanta sameynta sare, thixotropy iyo nafwaayay ka hooseeya AES-22S. kan hore waxaa loo isticmaalaa dhoobada halka tan dambe loo isticmaalo sidii biyo -yareeyaha loogu talagalay qalabka dab -damiska, oo caan ku noqda.
Cha Astaamaha Silicon Carbide (SiC)
Astaamaha Guud Nadaafadda qaybaha ugu muhiimsan (wt%) 97
Cufnaanta (g/cm³) 3.1
Nuugista biyaha (%) 0
Astaamaha Farsamada Awood dabacsan (MPa) 400
Modulus dhalinyaro (GPa) 400
Dhibaatada Vickers (GPa) 20
Astaamaha kuleylka Heerkulka hawlgalka ugu badan (° C) 1600
Isugeynta ballaarinta kuleylka RT ~ 500 ° C 3.9
Dhaqdhaqaaqa kuleylka (W/m x K) 130 110
Iska -caabbinta naxdinta kulul ΔT (° C) 300
Astaamaha Korantada Resistivity mugga 25 ° C 3 x 106
Dielectric joogto ah 10GHz -
Luminta korontada (x 10-4) -
Danab burburka Dielectric (KV/mm) -
Ramic Silicon Nitride Ceramic
Waxyaabaha Cutub Si₃N₄
Habka Sintering - Cadaadiskii Gaas ayaa La Dhex Galay
Cufnaanta g/cm³ 3.22
Midab - Madow Grey
Heerka nuugista Biyaha % 0
Modulus Da'yar Gpa 290
Vickers Hardness Gpa 18 - 20
Xoojinta cadaadiska Mpa 2200
Xoog Laaban Mpa 650
Dhaqdhaqaaqa kuleylka W/mK 25
Resistance Shoogga Kulaylka Δ (° C) 450 - 650
Heerkulka Hawlgalka ugu Badan ° C 1200
Resistivity mugga Cm · cm > 10 ^ 14
Dielectric joogto ah - 8.2
Xoogga Dielectric kV/mm 16
Sax Granite, La taaban karo Epoxy, Sax Granite dusha sare, Isbarbar dhigyada Granite Precision, Sax Granite Cube, Qalinka Granit Square Ruler,